नयाँ वर्ष २०७७ को मंगलमय शुभकामना साटासाट गरिरहदा अधिकांश नेपालीहरु चिन्ता र भयमा छन् । अहिलेम्म नेपालभित्र कडा रुपमा नदेखिएको कोरोना महामारीले कुनबेला, कसरी खुट्टा पसार्ने हो ? त्रास यही हो । अझ झन सत्तारुढ दल र विपक्षी दुबैथरि भ्रष्ट, नालायक शिद्ध भइसेकालेनेपालीहरु आशंकित भएका छन् । हाम्रो मुलुकका लागि प्रार्थना गर्नु त छँदैछ, अव छिमेकी भारतमा नफैलियोस्, चाँडै नै नियन्त्रणमा आवस् तवमात्र हामी सुरक्षित हुनसक्छौं भनेर कामना पनि गर्नुपरेको छ । हुन पनि नेपालमा परिस्थिति काबुमा नै छ भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन । भारतमा दिनहुँ फैलिदै गएको कोरोना भाइरस नेपालत्रि पनि त्यसरी नै सल्कियो भने यहाँको स्थिति के होला ? कल्पनामात्रले सातो जान्छ । सरकारी तदारुकताको कुरा गर्ने हो भने वैशाख ३ गतेसम्को लकडाउन अवधि बढाउने र त्यसलाई बैशाख १८ गतेसम्मका लागि पु¥याउने समाचार फैलाएर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको छ भने राष्ट्रपति महोदयादेखि लिएर प्रचण्ड अनि अरु दलका नेताहरुसमेत नयाँ वर्ष २०७७ को उपलक्ष्यमा दिएका शुभकामना सन्देशहरुमा कोरोनाबारे सुझाव दिएर दायित्व पूरा गरिरहेका छन् ।
विचल्लीमा छन् जनता । गरीवदेखि पशुसम्मको बेहाल छ । भोकभोकै परेपछि पैदलै हिडेर गाउँघर जानेको लर्को छ । उता लकडाउनका कारण जरुरी सरसामानको अभाव बढ्दो छ, पाइहाले पनि चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् जनता । स्थानीय सरकारको कामप्रति रोष बढ्दैछ । राहत सामग्रीको वितरण निष्पक्ष भएन भन्ने आरोप बढ्दो छ । केही जिललाहरुमा त सडेको, बिग्रेको सामग्रीहरु वितरण गरियो भन्ने प्रमाणिक समाचार आएका छन् । त्यस्तै गरेर यही मौकामा विभिन्न जिल्लामा वन फडानी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको चोरीनिकासी बढेको छ । केन्द्रमा मन्त्री, सचिवहरु भ्रष्टाचार गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तिनकै कार्यकर्ताले लुट्ने । मुलुक यस्तै बेथितिमा छ । मुलुक भ्रष्टाचारमय भइसकेको छ यतिबेला ।
मुलुकको अवस्था नाजुक देखेर पूर्वराजाले बेला बेलामा ट्वीटर मार्फत सरकारलाई सचेत गराउने गरेका छन् । नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देशमासमेत मुलुक र मुलुकवासीको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु भएको छ । सरकार यस्तै छ, जनता सोझा छन् । सही कुरा पनि कसैले सुन्नेवाला छैनन् । दुई तिहाइको दम्भमा सरकार विपक्षी र जनतालाई पेलेरै जाने मूडमा देखिन्छ । कोरोनाको महामारी फैलिने खतरा भएको अवस्थामा कोही पनि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, सबक सिकाउने अवस्थामा छैनन् । विप्लव माओवादीले समेत सरकारलाई मौन साथ दिएको छ । यही भएर सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमा अहिले झन बढी दम्भ बढेको छ । उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन दिएको सुझावलाई समेत उनले खारेज गरिदिए । वर्तमान सरकार नै महामारीका लागि पर्याप्त छ भन्ने ओठे जवाफ दिए । भ्रष्टाचारकाण्डमा सञ्चारमन्त्रीलाई गलहत्याउने ओली अहिले महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका स्वास्थ्य र रक्षामन्त्रीलाई कार्वाही नगरेर संरक्षकको भूमिकामा देखिएका छन् । यो घटनालाई स्वयम् सत्तारुढ दलले समेत चरम तानाशाही भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । यसकारण यो सरकार बाँकी रहेका राष्ट्रभक्त संस्थाहरुलाई पनि भ्रष्टाचारमा मुछ्न र बिबादमा हाल्न चाहन्छन् कि भन्ने संशय उत्पन्न हुनपुगेको छ । खासगरी मेडिकल सामग्री खरिदमा नेपालीस सेनालाई जिम्मा दिएपछि यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो । तर नेपाली सेना कमजोर र बिबादमा मुछिन नचाहने र प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न कस्सिएर लागेको छ । नेपाली सेनाले आजसम्म विकास निर्माणदेखि आपत विपत व्यवस्थापनमा जहिले पनि ज्यान हत्केलामा राखेर प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गरेको इतिहास छ । नेपाली सेना राजनीतिबाट अलग रहेर काम गर्ने भएकाले कम्युनिष्ट वा अरु तत्वले जतिसुकै बिबादित बनाउन खोजे पनि आफ्नो व्यवसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकै छ । अहिले प्राप्त मेडिकल सामानको आपूर्ति व्यवस्था र कोरोनासँग अग्रपंक्तिमा उभिएर लड्न सेना लागिपरेको छ । यसकारण पनि अन्य सरकारी मेडिकल क्षेत्र र सेनाका सकल दर्जाप्रति नेपाली आश्वस्त र विश्वस्त देखिन्छन् ।
यता कोरोना महामारी जसले मानव सभ्यता नै सिध्याउने हो कि भन्ने त्रासदी फैलिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा पनि ओली सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ । मोज पनि भोज पनि मानसिकतामा छ ओली सरकार । यता लकडाउन सुरु गरिदियो, उता भ्रष्टाचार सुरु । २०७७ सालको अवसरमा हामी सबैले यी भ्रष्ट, मुलुकमारा, जनतामारा, राष्ट्रघातीहरुलाई किनारा लगाएर मुलुकको सही नेतृत्व चयन गर्नसक्नुपर्छ । महामारीलाई समेत कमाउने अवसर बनाउनेबाट आशा नगरौं । हिजो राजा थिए, डर थियो । आज त सबै भ्रष्ट । हामीलाई सही नेतृत्व छान्ने आँट र हौसला प्राप्त होस्, नयाँ वर्ष २०७७ को पुनः शुभकामना ।